ငွေရတတ်သောသူဖြစ်ခြင်း၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးရွေးချယ်မှုနှင့်ပတ်သက်ပြီးစပျစ်ရည်ကိုအောင်မြင်တဲ့ထုတ်လုပ်သူ - အောင်မြင်မှုပုံပြင်များမဂ္ဂဇင်း
Luben Rabchev နှင့်အတူအင်တာဗျူး
ဤပြဿနာ၌ငါသည်သူ၏ပျော်ရွှင်မှုကိုရှာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းဘူလ်ဂေးရီးယားအရွက်သူတစ်ဦးအချင်းလူသား, အားဖြင့်သင်တို့ကိုတွေ့ဆုံနေပါတယ်။ အဲဒီအချိန်တုန်းကသူ၏စိတ်နှလုံးသူဟာသန်းကြွယ်သူဌေးဖြစ်လာနှင့်ဒါခေါ် "အမေရိကန်အိပ်မက်" စစ်မှန်တဲ့လာစေသည်ရှိရာအမေရိက, သူ့ကိုစေပါတယ်။ နှစ်ပေါင်းများစွာအကြာမှာသူကနောက်တဖန်စပျစ်ရည်ကိုတစ်ထုတ်လုပ်သူဖြစ်လာသဖြင့်သူ့မိသားစုအစဉ်အလာကိုဆက်လက်ဘူလ်ဂေးရီးယားမှသူ့ကိုနောက်ကျောဖြစ်စေသောသူ၏စိတ်နှလုံး၌မခေါ်ဆိုမှုဖြစ်ပါတယ်။ ဤတွင်မြို့ Rousse အနီး Stalpishte, Mechka အတွက်သူဟာဧရိယာ၏သဘာဝအလှတရားကိုမီးမောင်းထိုးပြထားသည့်ဝိုင်ထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းရှုပ်ထွေး "ခုနစ်စဉ်မြေးဆက်" ဖန်တီးပေးပါတယ်။ အခုဆိုရင်နှစ်ပေါင်းများစွာက၎င်း၏အဖွင့်ပြီးနောက်, ရှုပ်ထွေးသော၏ဟိုတယ်အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုကကြီးမားတဲ့ဝယ်လိုအားနှင့်အလိုဆန္ဒတုံ့ပြန်နိုင်လိမ့်နိုင်ရန်အတွက်အခြားနှစ်ဆယ်သစ်ကိုဇိမ်ခံ Villas ၏ဆောက်လုပ်ရေးစီစဉ်လိုအပ်သည်, အောင်မြင်မှုများအတွက်မျှော်လင့်ချက်ထက်ကျော်လွန်ဒါအတွက်ဖြည့်ဖို့ကစတင်ခဲ့သည် အဲဒီမှာအပန်းဖြေဘို့။ ရှုပ်ထွေး၏စပျစ်ရည်မြေအောက်ခန်းထဲမှာသူတို့ကိုသဘာဝအရသာနှင့်အကျိုးရှိသောပါဝင်ပစ္စည်းများထိန်းသိမ်းထားဖို့ခွင့်ပြုသည့်မဆိုဓာတုဗေဒမပါဘဲအာမခံချက်အရည်အသွေးနှင့်ဇာစ်မြစ်နှင့်အတူစပျစ်သီးကိုသုံးမြိုးမြိုး, သူ့ကိုယ်ပိုင်ထုတ်လုပ်မှု, ကနေဝိုင်, ရှိပါတယ်။ ယနေ့ဒီစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ကြှနျုပျတို့နှငျ့အတူကသူ့ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်နှင့်အိပ်မက်များ၏သဘောပေါက်ဆီသို့ဦးတည်သည်သူ၏လမ်းကြောင်းကို ပတ်သက်. စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ဇာတ်လမ်းဝေမျှပါလိမ့်မယ်။ သူ၏နာမ Luben Rabchev ဖြစ်ပါတယ်။
မင်္ဂလာပါမစ္စတာ Rabchev ။ ထိုလုလင်သည်အကြောင်းကိုအကျဉ်းချုံး "သင်" ငါ့ကိုပြောပြပါနှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်သင်သည်ဤမျှလောက်များစွာသောလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းဘူလ်ဂေးရီးယားစွန့်ခွာလုပ်? ယင်းကိုမည်သို့ဖြစ်ပျက်ခဲ့တာလဲ
ဟယ်လို! ဤသည်ကို "စစ်အေး" ၏အချိန်နှင့်ကြိမ်အလွန်ကွဲပြားခြားနားခဲ့ကြသည်။ ကျွန်မနိုင်ငံရေးကိုစိတ်ဝင်စားခဲ့ဖူးဘူး။ အောင်မြင်ဖို့ရည်မှန်းချက်ရှိသူတစ်စုံတစ်ဦးကိုများအတွက်တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းတိုင်းပြည်စွန့်ခွာဖို့ဖြစ်တယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အချိန်အတွက်ကျနော်တို့ဒုက္ခသည်များ, သစ္စာဖောက်, လိမ်လည်မှု ... အားလုံးကို "ကောင်းသော" အမည်များဖြစ်ကြသည်သောအခါငါ left, သင်တို့စဉ်းစားနိုင်မ မှလွဲ. ။ ဒါဟာဘူလ်ဂေးရီးယားထဲကရရှိရန်အလွန်ခက်ခဲခဲ့ပါသည် - တစ်နှစ် 150-170 ကလူထက်မပိုအနောက်ပိုင်းဥရောပမှာရှိတဲ့ဒုက္ခသည်စခန်းများတွင်ရောက်ရှိသောလုပ်ဖို့စီမံခန့်ခွဲခြင်းခံခဲ့ရသည်။ ပိုပြီးအတော်များများဖမ်းမိခြင်းနှင့်တိုင်းပြည်ကိုပြန်လာပြီးခဲ့ကြသည်။ ဒါဟာအခြားကမ္ဘာတွင်ဖြစ်ခဲ့သည်။
သင်သည်အခြားတိုင်းပြည်၌သင်တို့၏အိပ်မက်ကိုလိုက်သွားပါအခါဤအရာအလုံးစုံအမည်များကိုအရေးမပါဘူး။ ဘူလ်ဂေးရီးယားယခုနောက်ကျကျန်ရစ်နေသည်လျှင်, သူကပိုပြီးအသိအမှတ်ပြုတဘက်, နောက်ကွယ်မှကျသွားတာ, အများကြီးဖြစ်ခဲ့သည်။ သငျသညျလွတ်လပ်မှုကိုအဲဒီအခြိနျမှာကဆိုပါတယ်ခဲ့ရာမှာအားလုံးမဟုတျကွောငျးကိုတွေ့မြင်ရန်, နားလည်ရန်အလွန်စမတ်မဖြစ်သင့်ပါတယ်။ Freedom ကိုသငျသညျအရာခပ်သိမ်းပိုင်ခွင့်ကိုပေးတော်မူ၏ - ကုန်သွယ်ရေး, ဖွံ့ဖြိုးရေး ... ငါ 1968 ၌ကျန်ကြွင်းပြန်ထို့နောက်သူကသန့်စင်သောအကြမ်းဖက်ဝါဒဖြစ်ခဲ့သည်။ သူတို့သည်သင့်မှ play မည်သို့ပင်ဂီတ, သငျသညျတလျှောက်ဆော့ကစားရမည်ဖြစ်သည်။ သင့်အနေဖြင့်အခမဲ့ကမ္ဘာကိုသွားနှင့်ဖြစ်ပျက်သမျှ။ ဘယ်သူမှသင်ဘယ်အရာကိုဂရုစိုကျတယျ။ ကျွန်မချက်ချင်းနီးပါးငါ့ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစတင်ခဲ့ပြီးတော့ကတည်းကအများအပြားအောင်မြင်သောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းခဲ့သတ္တိနှင့်စမတ်ခဲ့သည်။
US မှာသငျသညျစက်ရုံတစ်ရုံအတွင်းကြမ်းပြင်လောကထဲကလူတော်တော်များများ, ခြစ်ရာကနေစတင်ပေမယ့်မကြာမီပြုလုပ်ပြီးနောက်သင်တစ်ဦးလျှပ်စီး၏အရှိန်နှင့်အတူအောင်မြင်မှုလှေကားနှင့်ဤတက်ပြီးစတင်ဖို့။ သင့်ရဲ့အဲဒီမှာနှစ်ပေါင်းပထမဦးဆုံးစုံတွဲနှင့်သင်အောင်မြင်သွားပါပြီပထမဦးဆုံးအောင်မြင်မှုတွေအကြောင်းကိုအောင်မြင်မှုပုံပြင်များမဂ္ဂဇင်း၏စာဖတ်သူများအနည်းငယ်နှင့်အတူဝေမျှမယ်။
လောကထဲကလူတော်တော်များများဟာအလွန်တိုတောင်းသောအချိန်များအတွက်ခဲ့ - 2-3 ရက်သတ္တပတ်, ထို့နောက်ငါစက် operated - ... ပိုကြီးပြီးတော့, ပထမဦးဆုံးသေးငယ်တဲ့တစျခုထိုအခါငါက operated နေချိန်မှာကျွန်မစက်ကိုမြင်လျှင်ခဲ့ပါတယ်, ငါသညျငါ့ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစတင်ရန်နိုငျကွောငျးကိုမြင်လျှင်ခဲ့သည် - ဆို ငါလိုချင်ကြောင်းကြင်နာ။ ထိုအချိန်တွင်သင်မြို့နယ်မှ5ဒေါ်လာပေးရခဲ့ရပြီးနှစ်မိနစ်အကြာမှာသူတို့သင်လုပ်ငန်းရှင်တစ်ဦးအနေဖြင့်တစ်ဦးစာရွက်စာတမ်းပေးခြင်းခံခဲ့ရသည်။ ဘယ်သူမှဘာမှဂရုစိုက်။ ကြိုးစားပြီး - သင်ကြိုးစားကြည့်ချင်, သင်ပိုက်ဆံရှိသည်, စေရန်ပါပြီ။ ငါကားများပြုပြင်စတင်ခဲ့ပြီးကျွန်မလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း 4-5 ပိတ်ထားခဲ့ဟောင်းဓာတ်ဆီဆိုင်ဝယ်ယူခဲ့သည်။
ထိုနောက်ငါစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုနှင့်အတူဆက်လက် - ကားများအတွက်အပိုပစ္စည်းများ၏ရောင်းအား။ ငါကုန်သွယ်မှုပြုသောအမှုခံရဘယ်လိုလမ်းကိုပြောင်းလဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကိုယ့်အလွန်အောင်မြင်ခဲ့သည်။ ထို့နောက်တိုင်အောင်နေရာတိုင်းကမ္ဘာပေါ်မှာကဲ့သို့ဖြစ်၏ - သငျ, စတိုးဆိုင်၌ကျင်လည်ကောင်တာကိုသွားနှင့်ဆေးဆိုင်မှာအဖြစ်, သင်လိုချင်တဲ့အရာပြောပြပါ။ သငျသညျအင်္ဂလိပ်မသိရပါဘူးသောအခါမူကား, သင်လိုချင်တဲ့အရာဟုမဆိုနိုင်ပါ။ ထိုသို့အင်္ဂလိပ်သိတယ်မပြုခဲ့တဲ့သူပဲငါ့ကိုမဟုတ်ခဲ့ပေ။ မွေးဖွားမှာ America မှာအများအပြားရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်ရှိခဲ့သည်။ ဒါကြောင့်ကျနော်တို့ကကုန်ပစ္စည်းထွက်ထားကြ၏။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအလွန်အောင်မြင်သောခဲ့ - ငါ 1973 အတွက်မော်တော်ယာဉ်အစိတ်အပိုင်းများနှင့်အတူစတင်ခဲ့ပြီးနှင့် 1976 တှငျငါပြီးသားအဲဒီအခြိနျမှာပိုက်ဆံတွေအများကြီးခဲ့သည့်တစ်သန်းဒေါ်လာရှိခဲ့ပါတယ်။
ငါဂျာစီမှာရှိတဲ့စတိုးဆိုင်ကိုရောင်းပြီးနောက်ငါတစ် 60-တစ်တန်ရွက်လှေဟာအလွန်ကြီးမားတဲ့လှေဝယ်ယူခဲ့သည်။ သင်သည်သင်၏ပိုက်ဆံဖြုန်း - သင်တစ်ဦးအနေဖြင့်အဘို့ထိုသူတို့စုဆောင်းကြပါပြီ, သင်အလုပ်လုပ်ရပ်တန့်နှင့်ရွက်စတင်သူတို့ကိုခံစား။
ငါစတိုးဆိုင်ကိုရောင်းသောအခါမူကား, သူတို့ကိုဝယ်သူလူတို့သည်ငါ့မေးမြန်းခြင်းအပေါ်ထားရှိမည် "ကျနော်တို့ယခုအဘယ်သို့ပြုပါသနည်း" ငါသည်သင့်ကိုငါအနှီးကိုပြောင်းလဲသင့်ပါတယ်လျှင်, ငါသင်သည်အဘယ်အရာကိုသင်ပေးဖို့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းထားရှိမည်နှင့်ငွေရှာ, ကြပြီမဟုတ်မယ်လို့ "သူတို့ကိုပြောသည် လုပ်ရန်။ သငျသညျယခုကိုင်တွယ်ဖြေရှင်း, သင်ကဝယ်ကြပါပြီ, ပိုက်ဆံခဲ့ပါတယ်။ သင်မှန်, စီးပွားရေးသမားများရှိပါသလဲ အီတလီ, သွေးနှော - "ဝယ်သူများသည်စီးပွားရေးသမားများအိုငျးရစျဂုဏ်ယူခဲ့ကြသည်။ သူတို့ဖောက်သည်သောမယုဒလူတို့မဟုတ်သလိုတဲ့ဘူလ်ဂေးရီးယား, ရုရှား, ပိုတိုရီကန်, သည်းမခံနိုင်ဘူး။ သူတို့ဟောင်းကားများဝယ်ယူခဲ့ကြသည်အဖြစ်သူတို့ကိုငါပြုပြင်တာတွေကြောင့်ကျနော်တို့အဆင်းရဲဆုံးဖောက်သည်တွေနဲ့အလုပ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါကားများပြန်ထို့နောက်အလွန်ရိုးရှင်းပြီးပြုပြင်ရန်အလွန်လွယ်ကူသောခဲ့ကြသည်နှင့်အကျွန်ုပ်တို့ကသူတို့ကိုလမ်းညွှန်စာအုပ်များရောင်းချခြင်းခံခဲ့ရသည်ကျနော်တို့ကသူတို့ကိုတစ်ခုခုဆုံးမဩဝါဒပေးခဲ့ကြသည်ကိုဘယ်လို, သူတို့ကိုဖေါ်ပြခြင်းခံခဲ့ရသည်။ ကျနော်တို့ကဒီနှင့်အစားထိုးမည်သို့သင်တန်းများအောင်ခဲ့ကြသည် - ငါတို့သည် 20-30 လူတွေကစုဆောင်းကြပြီးကျွန်တော်သူတို့ကိုရှင်းပြခဲ့ကြသည်။ ထိုသူအပေါင်းတို့သည်ငါတို့ကဲ့သို့ဖြစ်ကြသည် - လူသစ်များ - အချို့သောဒေါ်လာကယ်ဖို့ကြိုးစားနေ။ ဒါကြောင့်တစ်ဦးစံပြအခွအေနေဖြစ်ခဲ့သည်။
ငါလှေဝယ်ပြီးနောက်နှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသစ်ပိုင်ရှင်များအရာရာကိုအဘို့အကြှနျုပျကိုထွက်ရောက်ရှိအပေါ်ထားရှိမည်သကဲ့သို့ငါဟူစတန်ပြောင်းရွှေ့ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီမှာကြှနျတေျာ့လှေထားနိုင်အောင်ငါရေအားဖြင့်, Clear ကိုရေကန်၏ကမ်းခြေပေါ်အိမ်တအိမ်ဝယ်လိုက်တယ်။ သို့သော်ဤငါ့ကိုပင်ပန်းစေကြ၏။ တစ်ဦးကဘဝတစျခုလုံးကိုလူတိုင်းအနားယူ၏အိပ်မက်, ဒါပေမယ့်သင်အမှန်တကယ်အနားယူကြပါလျှင်, ဘာမှလည်းမရှိ။ သို့ဖြစ်. , အလုပ်ရှုပ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုစောင့်ရှောက်ရန်, ငါ, တဖနျမော်တော်ယာဉ်အစိတ်အပိုင်းများအဘို့အ Pasadena, Houston တက္ကဆက်မှာဒီအချိန်ဟာစတိုးဆိုင်ဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့်ငါလေးနှစ်နီးပါးခန့်လှည့်သည်အထိသူတို့ 16 စတိုးဆိုင်များဖြစ်လာခဲ့သည်။ အဲဒီအချိန်တုန်းကစနစ်ထိုကဲ့သို့သောခဲ့ - သင်တစ်ဦးဆိုင်ဖွင့်, သငျသညျအခြို့သောအမြတ်အစွန်းရှိသည်နှင့်သင်ကြီးထွားဖို့ကိုဆက်လက်မပေးကြပါလျှင်, သင်အခွန်အဖြစ်အမြတ်အစွန်းအများစုပေးဆောင်ပါလိမ့်မယ်။ သငျသညျငွေရှာချင်လျှင်မူကား, သင်နိုင်စွမ်းလူတစ်ဦးဖြစ်ကြောင်း - သငျအခွန်ပေးဆောင်ကြဘူး - သငျ, မြို့တော်ရှိသူများအမြတ်အစွန်း ယူ. သငျသညျသစ်တစ်ခု store မှာသူတို့ကို reinvest ။ သူတို့ကလူပေါကြွယ်ဖြစ်လာမှအောင်ခဲ့သည်ဤနည်း။ ဒါကြောင့်ဒုတိယစတိုးဆိုင်ပြီးနောက်တတိယအပြီး, သူတို့ကကျွန်မအခွန်အဖြစ်ငွေကိုပေးဆောင်ဖို့မနိုင်ရန်အတွက်တိုင်းသုံးလအသစ်တစ်ခုကိုဆိုင်ဖွင့်ခဲ့ကြောင်းဤမျှလောက်ငွေရှာဖို့စတင်ခဲ့သည်။ ဒါနဲ့မဟုတ်ရင်ပြည်နယ်မှပေးဆောင်ခဲ့သောထိုအခွန်အခများသည်, ငါ့အသစ်ကိုဆိုင်ငါ့ကိုလုံးဝဘာမျှမ coasted ။
အတော်များများကဒီမိုကရေစီ, ထို့နောက်ကတည်းကလွန်အများအပြားရီပတ်ဘလစ်ကန်။ ဒါကြောင့်အဟောင်းအရင်းရှင်ခဲ့ထိုအချိန်တွင်သင်သည်နိုင်စွမ်းရှိပါတယ်, သင်တစ်ခုခုအောင်မြင်ရန်ချင် - သင်အလုပ်လုပ်ကြသည်။ သင်ကစုရုံးနေထိုင်ရာမှာနေထိုင်ချင် - ကသင့်ရဲ့ရွေးချယ်မှုပါပဲ။ သတ္တုတွင်း၏သူများသည် 16 စျေးဆိုင် 500 စတိုးဆိုင်များထက်ပိုမိုခဲ့ကြောင်းထို့နောက်ကြီးမားကုမ္ပဏီမှဝယ်ခဲ့ကြသည်။ ထိုအခါကြီးတွေသူတွေကိုသင်သည်ရိုက်နှက်မနိုင်နှင့်သင်သည်ထိုသူတို့ရိုက်နှက်မနိုင်သည့်အခါ, သင်သည်ထိုသူတို့ join, သူတို့နှင့်အတူပေါင်းစည်း။ ချစ်ခြင်းမေတ္တာသည်ချစ်ခြင်းမေတ္တာဖြစ်ပေမယ့်ခွဲခြာများအတွက်အချိန်ကြွလာသောအခါ, သငျသညျခွဲခြား။ သငျသညျအများကြီးပိုငွေနှင့်တစ်ဦးဆုရှင်အဖြစ်သွားရအထူးသဖြင့်အခါ။
ထိုအခါဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းကိုရောက်လာတယ်။ ထိုအရပ်မှ, ဟူစတန်ကနေငါကယ်လီဖိုးနီးယား, Laguna သို့သဲသောင်ပြင်သို့ပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်။ ငါ Palm Springs အတွက်ဆောက်လုပ်ရေးနှင့်အတူစတင်ခဲ့သည်။ လူတိုင်းဓာတ်သတ္တုရေနှင့်အတူရေကူးကန်နှင့်အတူအခြားဖုံးလွှမ်းရန်မည်သူမဆိုမပါဘဲချိုင့်ဝှမ်းကိုတွေ့မြင်နိုင်အောင်ငါသဘာဝကြမ်းပြင်ပေါ်မှာတည်ရှိပြီးခဲ့ပြီးသော 49 ဇိမ်ခံတိုက်ခန်းများ၏ရှုပ်ထွေးသောဖန်ဆင်းတော်မူ၏။
© Sedyankov & Kartchinski စတူဒီယို
သူများသည်တိုက်ခန်းများကိုသင်ကောင်းတစ်ဦးဝင်ငွေဆောင်ကြဉ်းသော်လည်း, သင်သည်အပြီးအားလုံးသူတို့ကိုရောင်းဖို့ဆုံးဖြတ်။ အဘယ်ကြောင့်?
သူတို့ကငါ့ကိုငါးရာတထောင်ဒေါ်လာအမြတ်အစွန်းလည်းဆောင်ခဲ့လေ၏။ အဲဒီအချိန်တုန်းကသူကငွေအများကြီးဖြစ်ခဲ့သည်။ ငါမှာအားလုံးသူတို့ကိုမရောင်းချင်ကြဘူး, ဒါပေမယ့်တစ်စုံတစ်ဦးကို, သငျသညျများ၏ရှေ့မှောက်၌အဘယ်သူမျှမတရားသူကြီးတွေဆုရရှိသူတစ်ဦးကြီးတွေအရိုးကိုထည့်လေ့မရှိသည့်အခါ။ အမြတ်အစွန်းလည်းမရှိဆိုပါက - သင်ကယူပါ။
ငါကအခြားအဆောက်အဦးများနှင့်ပလပ်စတစ်ထုပ်ပိုးများအတွက်စက်ရုံတစ်ရုံအတွင်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံခဲ့သည်။ နှင့်တဖြည်းဖြည်းနှင့် ပတ်သက်. တရာကလူကနေခြောက်နှစ်အဘို့ဤစက်ရုံတစ်တထောင်ကလူတက်သွားလေ၏။ Los Angeles မြို့ပြီးနောက် - ကီ, Salamanca - - မက္ကစီကိုနှင့်စန်တီယာဂို - ချီလီကယ်လီဖိုးနီးယားကျွန်တော်အွန်, Bowling Green ထံသို့သွားလေ၏။ ဒီစီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှာငါစစ်ပွဲနဲ့ငါ့မိတ်ဖက်တွေနဲ့နှံ့ပြား။ နှစ်ဖက်စလုံးကသူတို့က, ဆုံးရှုံးခဲ့ - ငါ့ကိုထက်အများကြီးပို။
ဒါဟာဒီလိုမဖွစျနိုငျသညျ။ ငါထို့နောက်ဂတ်စ်သို့ပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်။ ငါတကယ်ကြီးမားကြီးမားတဲ့အိမ်တော်ကိုတည်ဆောက်ခဲ့သည်။ ထိုအခါငါအငြိမ်းစား, ဒါပေမယ့် Vegas မှာငါဘာမှလုပ်နေတာမဟုတ်ဘူးခဲ့သည်။ ငါဘာမှငြီးငွေ့တယ်တစ်ခုခု, ဘူလ်ဂေးရီးယား၌ဤအချိန်လုပ်နေတော့တာပဲ။
တကယ်တော့, သင်သည်သင်၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအမြတ်အစွန်းအမျိုးမျိုးအဆင့်ဆင့်မှတဆင့်ဝင်ကြပြီ။ သင်တစ်ဦးလုပ်ငန်းရှင်အဖြစ်သင့်ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနှင့်သင်ကိုယ်တိုင်သိမြင်လမျး၌ပြောင်းလဲမှုတချို့ကြင်နာခံစားခဲ့ရသည့်အခါခဏရှိခဲ့ထောင်ပေါင်းများစွာတန်ဖိုးရှိဖြစ်သောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုစီမံခန့်ခွဲသူတစ်ဦးခေါင်းဆောင်များ၏အတွေးအခေါ်တစ်ခုကွာခြားချက်ရှိပါတယ်, တစ်သန်းနှင့်ဥပမာတစ်ဆယ်သန်းများအတွက် ဒေါ်လာ?
စီးပွားရေး၏အခြေခံအတူတူပင်ဖြစ်ပါသည်။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၏သင်္ချာကိုသိရှိသူတစ်ဦးသည်လူအဘို့, အဲဒါကိုဖြစ်လတံ့သောအရာကိုအရေးကြီးသောမဟုတ်ပါဘူး။ ဤသူသည်ငါစီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုသိသောအခါ, ငါသညျလညျးသော့ခလောက်နှင့်အခွံမာသီးကိုဖွင့်ဖို့ဘယ်လိုသိကြရမည်ဟုမဆိုလိုပါ။ လူအတော်များများဟာငွေကိုနားလညျမှုလှဲမှားနှင့်ငွေအလုပ်ကိုသူအဘယ်ကြောင့်သူတို့အားတွေးမိ။ ပိုက်ဆံအရေးမှငြိမ်း။ သငျသညျဤ 100, ဤ၏ 100 နှင့်များ၏ 100 နှင့် 5-6 ကားများရှိသည်လိမ့်မယ်, သူတို့သင်တို့အဘို့အဘယ်သူမျှမတနျဖိုးရှိပါလိမ့်မယ်။ ဖန်တီးရန်, တညျဆောကျတယျဆိုတာဘာကိစ္စရပ်များဖြစ်ပါသည် .. အခုတော့သူတို့ကိုငါတစ်သဲလွန်စမလိုဘဲ5အမှတ်တံဆိပ်အသစ်ကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းစတင်ဒါပေမယ့်ငါ့ကိုဆီးတားပါဘူး, ဘူဂေးရီးယားဗျူရိုကရေစီပဲ။
ငါလွမ်းဆွတ်မှုခဲ့ဖူးဘူး, ဒါပေမယ့်တစ်စုံတစ်ဦးကအိုမင်းသောအခါသူသည်မိမိအမြစ်များမှပြန်လည်ရောက်ရှိ။ ဒါကြောင့်ဆုတ်ခွာဖို့အချိန်ကြွလာသောအခါ, သငျသညျသေးခြင်းငှါ, ငြိမ်ဝပ်စွာရန်, သဘောသဘာဝမှဆုတ်ခွာဖို့လာ, ကပါပဲ။ ငါရွာ၌ဖွားမြင်ပါ၏နှင့်ငါသည်ဤလောက၏အကြီးဆုံးမြို့ကြီးများအတွက် duress အောက်မှာနေထိုင်ခဲ့ကြပါပြီ။
ဘူလ်ဂေးရီးယားအလွန်ချက်နဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအလွန်နိုင်စွမ်းဖြစ်ကြပြီးဒီတိုင်းပြည် stunningly အစာရှောင်ပိုကောင်းအနာဂတ်များအတွက်ပြောင်းလဲနိုင်သည်။ ပြည်ပမှာနေသောဘူဂေးရီးယားပြန်လာနှင့်စည်းလုံးညီညွတ်နေလျှင်, အမှုအရာ fixed နိုင်ပါသည်။
သူတို့မိသားစုကိုထောက်ပံ့ဖို့ကဒီမှာပိုက်ဆံပို့ရှိသည်, ဒါပေမဲ့ဒီပိုက်ဆံတွေကိုအစားအစာ, သို့မဟုတ်ကျော်ကြားမှု, ဒါမှမဟုတ်အဝတ်အစားသွား, သူတို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေဘို့မသွားနဲ့ဘူလ်ဂေးရီးယားတူညီသောအဆင့်တွင်ဆက်နေရန်ဆက်လက်အဘယ်သူသည်ဘူဂေးရီးယား။
သူတို့ပြန်လာပြီးသူတို့သင်ယူခဲ့ရာလျှောက်ထားခြင်းနှင့်ဖန်တီးဆိုရင်သူတို့တော့ဘူးပိုက်ဆံမပို့မညျမဟုတျ, ဒါပေမဲ့သူတို့နှစ်ကြိမ်လောက်လုပ်ပါလိမ့်မယ်။ ဘူလ်ဂေးရီးယားအရာအားလုံးတို့အတွက်ဆာလောင်မွတ်သိပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ကြီးမားသောအခွင့်အလမ်းများရှိပါသည်။
အများအပြားဗျူရိုကရက်, များစွာသောစစ်ဆေးရေးမှူးရှိဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, နည်းပါးလာအရာဝတ္ထုရှိပါတယ်အခါ, သူတို့ဘာမှရှိသည်ကြောင့်ထိုအခါက, အဗျူရိုကရက်စစ်တိုက်ခြင်းငှါအလွန်လွယ်ကူပါလိမ့်မယ်။ ပစ်ခတ်ရသူတို့၏လစာစောင့်ရှောက်ခြင်းနှင့်မ, လာကြခြင်းနှင့်အရာတစ်ခုခုကိုရှာစတင်ဖို့။ သူတို့ကထိုင်ပြီးဘာတိကျမ်းစာ၌လာသည်ကား .. ရေးဖို့စာရွက်တစ်ရွက်ကိုဆုတ်ဖဲ့နှငျ့သငျဖို့ကပေး, ဖတ်, ကဘာသာပြန်ဆိုရန်စတင် - သင်က decipher လို့မရပါဘူး ..
© archive ကို (အထကျရုပျပုံ - အဟောင်းဝိုင်ထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း from1941)
ယခုတိုင်အောင် 2009 အတွက်ဘူလ်ဂေးရီးယားရန်သင့်ပြန်လာကတည်းကကိုသင်6၏ကျဆုံးခြင်းအတွက်ဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့်ကိုယ့်ရဲ့အရာ Rousse အနီး Stalpishte, Mechka ၏ဧရိယာအတွင်းဝိုင်ထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းရှုပ်ထွေး "ခုနစ်စဉ်မြေးဆက်" ၏ဆောက်လုပ်ရေးအတွက် 2014 သန်းယူရို, ထက်ပိုမိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံခဲ့ကြ သင့်ရဲ့ကြီးမားတဲ့ဘူဂေးရီးယားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းစီမံချက်၏အစအဦး။ အဘယ်ကြောင့် "ခုနစ်စဉ်မြေးဆက်"?
ငါကဒီမှာနှင့်အခြားဒေသများနှင့်မြို့ကြီးများအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခဲ့သည်။ ငါပဉ္စမမျိုးဆက်ဖြစ်ကြောင်းကိုကြောင့်, ငါ့သမီးဆဌမဖြစ်ပါတယ် "ခုနစ်စဉ်မြေးဆက်က" အမည်ရှိ - သူမကကျွန်မကိုထက်အများကြီး, အများကြီးပိုကောင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဖြစ်ပါတယ်။ သတ္တမမျိုးဆက်ငါ၏အမြေးဖြစ်ကြပြီးသူတို့ကိုမှတပါး, အဋ္ဌမမျိုးဆက်လည်းယခုလည်းမရှိ။ ငါ၏မဟာ-ကြီးမြတ်-အဘိုး (: အဝိုင်ထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းစာရေးသူ) သည်ဤအမှုအရာကိုတည်ထောင်ခဲ့သည်
ယခုတွင်ငါသည်အဘို့အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုသို့သွားချင်ကြပါဘူး, ဒါပေမယ့်ငါကဒီစီမံကိန်းအကြောင်းသင်ဤပြောပြနိုင်: နောက်ဆုံးညဥ့်ကျနော်တို့ကနေအီးမေးလ်တစ်စောင်လက်ခံရရှိ ကျနော်တို့သုံးဝိုင်ကိုစလှေတျဘယ်မှာ San Francisco မှာကမ္ဘာ့ဝိုင်ပြိုင်ပွဲ, - အဲဒီသုံးဝိုင်အနေဖြင့် - ငါတို့သည်လည်းပို့ကုန်ပြုပါ, ကျနော်တို့ US မှာရောင်းချ ငွေနှင့် Cabernet - - ကြေးဝါဟာ Merlot ရွှေတံဆိပ်, အ Cuvee ကြာပါသည်။ စပျစ်ရည် 4600 သည်အခြားပုလင်းကျော်နှင့်အတူယှဉ်ပြိုင်ပြီးနောက် - ကဘူဂေးရီးယားဝိုင်အနိုင်ရကြီးမားတဲ့အောင်မြင်မှုဖြစ်ပါတယ်။ က Napa, အမေရိကန်စပျစ်ရည်ကိုစက်မှုလုပ်ငန်း၏စိတ်နှလုံးကြောင့်ဆန်ဖရန်စစ္စကို, အများဆုံးလေးနက်နှင့်ခက်ခဲတဲ့ဖြစ်ပါတယ်။
သင်ကအောင် start ရှေ့တော်၌ထိုစပျစ်ရည်ကိုအဘယျသို့ခငျြပါသလဲ? ဒါဟာနွေးသောနေ့ရက်နှင့်အအေးညဥ့်လိုလားကြောင့်အကောင်းဆုံးဝိုင်စေသည်။ တောင်ပိုင်းဘူလ်ဂေးရီးယားဝိုင်စေသည်, ဒါပေမဲ့သူတို့ကြာရှည်မရှိကြပေ။ သူတို့ကဒီအရသာရှိသည်မဟုတ်ကြဘူး။ အဆိုပါအရသာပျောက်သွားမှာ။ အဲဒီမှာအထဲကသူတို့တစ်တွေပူနွေးသောနေ့ရက်နှင့်နွေးထွေးသောညဥ့်ရှိသည်။ ပင်လယ်နက်အနီးတစ်ချိန်တည်းမှာပင်ကြောင့်ချမ်းအေးသောလေထုနှင့်စိုထိုင်းဆများသည်လည်းကောင်းသောမဟုတ်ပါဘူး။ မြစ်အပူချိန်လျော့နည်းစေတယ်လေနှင့်လေတိုက်ကျွန်တော်တို့ကိုဆန့်ကျင်လာ, မြစ်တစ်ဦးအလှည့်ကိုကအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကိုလာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျနော်တို့ဒီမှာစိုထိုင်းဆမရှိကြပါဘူး။ ထို့နောက်သူတို့အ clayey မြေဆီလွှာများစပျစ်ရည်ကိုအဘို့လိုအပ်အတိအကျဘာရှိပါသည်။
နှစ်နှစ်အကြာ ရောဘတ်က Parker ဤနေရာတွင် လာ. စပျစ်ရည်ကိုအလွန်မြင့်မားသောအမှတ်အသားများကိုပေး၏။ သငျသညျကွားရကြပြီမဟုတ်ခဲ့လျှင်သင်သည်ထိုသူတို့စမ်းသပ်ဖို့ချင်ယေဘုယျအားလျှင်သင်ဖို့ 20 တထောင်ကနေဆပ်ဖို့ရှိသည်ကြောင့်သူသည်ကမ္ဘာ့အကျော်ကြားဆုံးစပျစ်ရည်ကိုဝေဖန်ဖြစ်ပြီး, သူ့ကိုသူတို့ကိုစမ်းသပ်ဖို့သူတို့ကိုမြည်းစမ်းဖို့ဝိုင်ပေးပို့ဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုမေးခဲ့တယ် 25 တထောင်ဒေါ်လာ။ သူကအရမ်းစပျစ်ရည်ကိုကြိုက်တယ်ထိုနောကျမှသူ့ကိုအလွန်အမင်းကချီးကျူးထောပနာကြသူအမေရိကန်ခရီးသွားဧည့်အတော်ကြာအုပ်စုများရှိကြ၏သောရိုးရှင်းသောအကြောင်းပြချက်များအတွက်, သူတို့ကိုစစ်ဆေးနိုင်ရန်, သူ့ကိုယ်စားသူတို့ကိုပေးပို့ဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုမေးတယ်။ အဲဒီအချိန်တုန်းကဒီဘူဂေးရီးယားစပျစ်ရည်ကိုသာတစ်နှစ်, တနှစ်နှင့်ဟောင်းတစ်နှစ်ခွဲဖြစ်ခဲ့သည်။ အခုတော့အဲဒါကိုကိုယ်နှိုက်ကတိုးတက်ကောင်းမွန်, ရင့်ကျက်။ ကျနော်တို့ဝိုင်အိုမင်းနေကြရသော 330 ပိတ်ပင်စည်ရှိသည်။
ငါ၏အရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ၏ပြန်လာမှာငါ့အလိုရှိသမျှကတ်များအတွက်မဟုတ်ပါဘူး။ ကမ္ဘာကြီးကိုငါ့နောက်မတည်ရှိနေဆဲဖြစ်သည်။ ကျနော်တို့ရှစ်စဉ်မြေးဆက်, သေးသောကြောင့်တစ်စုံတစ်ဦးအဘို့ကောင်းသောဖြစ်လိမ့်မည်။ ဒါကြောင့်မပါလျှင်, အစဉ်မပြတ်ကူးယူမည်သူတစ်စုံတစ်ဦးရှိပါလိမ့်မယ်။ ပိုက်ဆံအရေးမထားဘူး။
သငျသညျကိုဆင်း Stalpishte ကိုသွားလျှင်သင်သည်အဘယ်အရာကိုမြင်နိုင်ပါသည်။ ဒါဟာအထပ်ထပ်ဖကျြဆီးခံခဲ့ရကျနော်တို့ပြန်နှင့်ယခုကျွန်တော်ဖျက်ဆီးနှင့်။ စာရွက်စာတမ်းများမှန်မှန်ကန်ကန်အတွက်ဖြည့်ကြသည်မဟုတ်သောကြောင့်, ငါတို့သည်ကြောင့်ပျက်စီးခဲ့ရသည်တစ် 120 အသက်အနှစ်အဆောက်အဦရှိခဲ့သည် - ။ သငျသညျအပြည့်အဝက restore ။ တစ်ချိန်ကမတိုင်မီဤအရပျမှာအဟောင်းရေချိုးခန်းရှိခဲ့သည် ... သငျသညျဤပုဂ္ဂိုလ်, ကအတည်ပြုကြောင်းလူတစ်ဦးကအတည်ပြုရန်အဘို့အသွား 7-8 လအတွင်းရှေ့မှာမပွုနိုငျ ... မိုက်လုပျထုံးလုပျနညျး .. - သင်ကအိမ်သာနှင့်ရေချိုးခန်းအောင် ငါတို့ရှေ့မှာသင်, သွားညုမြစ်ရိုက်ထည့်ပါနှင့်သင်ညု၌ရှိကြ၏မသိဘဲရေနစ်နိုင်သည် - အရာအားလုံးရှုတ်ထွေးခဲ့ - သငျကားနှင့်အတူရုတ်တရက်ပေါ်လာနှငျ့သငျနည်းနည်းပိုမြန်မောင်းမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟာအရာအားလုံးရှင်းလင်းပြီးနောက် ... , သူတို့သညျ လာ. အကြှနျုပျတို့ကိုပြောသည် ကျနော်တို့မြစ်၏ဂေဟစနစ်၏သမာဓိချိုးဖောက်ကြပြီ။ ကောင်းပြီ, ပရိယာယ်မှဒီကနေသွားပါ - အရာအားလုံးရှုတ်ထွေးဖြစ်ပါတယ်။ ဘူလ်ဂေးရီးယား၏အဆုံးဒီကနေ Go ဘဲဂရိတ်ရောက်ရှိ ... ဂေဟစနစ် ... ငါရည်ရွယ်ချက်အပေါ်နိုင်ငံများကတဆင့်မြစ်ပေါ်တက်ကဒီမှာနေတဲ့သင်္ဘောနှင့်အတူခရီးထွက်ယမန်နှစ်က - ဥရောပတစ်ခုလုံးအတွက်ညုရင်ဆိုင်နေရတာဖြစ်ပါတယ် - ထို levee, စက်ဘီးကိုစီးသောလူသည် Two-သုံးကီလိုမီတာအနည်းငယ်စားသောက်ဆိုင်လည်းမရှိ, လူများကိုကျော်မအိပ်နိုင်သည့်နေရာများသူတို့သားသမီးတွေနဲ့သူတို့ရဲ့စက်ဘီးနှင့်အတူလူတွေအနားယူနေကြတယ်, ရှိပါတယ်။ ဒါက Eco ဖြစ်ပါတယ်။ ငါတို့ဒီ Eco - စာငှက်ကဲ့သို့အခြင်။ ဘယ်လိုတပြင်လုံးကိုအနောက်တိုင်းဥရောပတစ်လျှောက်လုံးတစ်ခုတည်းခြင်မရှိကြောင်းနိုင်သနည်း ဤတွင်ကျနော်တို့ခြင်ဆန့်ကျင်နောက်ဆုံးပေါ်နည်းပညာရှိသည်။ ဒါဟာမဆိုလမ်းထဲမှာအပင်ကိုထိခိုက်စေပါဘူး။ ဒါဟာပျားမသတ်ပါဘူး, ဒါပေမယ့်သူတို့ကိုသင်အပေါ်ကိုလေပေါ်မှာပလျှင်, အခြားပျားသူတို့ကိုပြန်အုံသို့အရမသွားပါစေပါဘူး။ ကျနော်တို့နှောင်းပိုင်းတွင်ညဥ့်မှာဒီအရာလုပျအဘယ်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒါကိုသာခြင်ဦးသေဆုံး, တစ်ခုတည်းယင်ကောင်ကိုသတ်မထားဘူး။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဧရိယာနှင့်ငါ့အိမျသာကိုလေပေါ်မှာပ။ ကျနော်တို့ဘယ်နေရာမှာမဆိုတခြားကိုလေပေါ်မှာပခွင့်ပြုမထားပေ။
လက်ရှိတွင် Colibri ထုတ်ဝေအိမ်သူအိမ်သား ကျနော်တို့ Svetlio Jekov နှင့်အတူအတူတကွအလုပ်လုပ်ခြင်းနှင့်အရာအပေါ်တစ်ဦးစာအုပ်ပြီးသွား၏လုပ်ငန်းစဉ်မှာဖြစ်ပါတယ် ရေမွန် Wagenstein။ အဲဒီအကြောင်းတစ်လ, တစ်လနှင့်တစ်နှစ်ခွဲအတွင်းထုတ်ဝေခံရဖို့မျှော်လင့်ထားကြောင့်အခုအချိန်မှာကျနော်တို့အကြောင်းပြောနေတာဖြစ်ကြောင်းဤအရာအလုံးစုံတို့ကိုအကြောင်း, ဒါပေမယ့် သာ. ကြီးမြတ်အသေးစိတ်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။
ပိုကောင်းတဲ့အရာတစျခုဖွစျသညျ: US မှာလူသန်းပေါင်းများစွာနှင့်အတူနိုင်ငံတကာမြို့တော်သို့မဟုတ်ဘူလ်ဂေးရီးယားအတွက်ငြိမ်းချမ်းသောအသေးရွာများတွင်အသက်တာ၌အသက်တာကို?
ဒါဟာအမြဲတမ်းကြီးမားသောမွို့၌အသက်ရှင်ရန်လူငယ်တစ်ဦးထက်ပိုသောအံ့သြဖွယ်ဖြစ်လိမ့်မည်။ သငျသညျအဟောင်းများကိုကြီးထွားအခါ, သငျသညျ mellow ဖို့နှင့်ငြိမ်းချမ်းရေးရှာစတင်ဖို့။
အဖြစ်ဝေးငါသိသည်အတိုင်း, သင်ကချမ်းသာကြွယ်ဖြစ်ခြင်းပုဂ္ဂိုလ်ရေးရွေးချယ်မှုကိစ္စကြောင်းထင်ပါတယ်။ ဤကိစ်စတှငျ, သင့်ရဲ့အောင်မြင်မှုနှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်၏ပုံသေနည်းတစ်ခုအောင်မြင်သောရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၏ပါဝင်ပစ္စည်းများဘာတွေလုပ်နေလဲသလဲ?
သငျသညျလုပျနိုငျဆုံးရိုးရှင်းတဲ့အရာ - တစ်ပုံ (ရေးသားသူ: ပိုက်ဆံပမာဏကို) စာရေးအဖြစ်တာသင်ရွေးချယ်အတိုင်း, သင်တို့၏အိပ်ရာအထက်မျက်နှာကြက်ပေါ်မှာ။ ကမှာနေ့တိုင်းကြည့်ပြီး "ငါကိန်းဂဏန်းရောက်ရှိဖို့ရန်ရှိသည်။ " ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြောပြသင်ကသူတို့နှင့်အတူအိပ်သွားပါလိမ့်မယ်, ဒါနှင့်အတူနိုးထပါလိမ့်မယ်။ သငျသညျအဘယ်သို့ပြုရမည်အပေါ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအာရုံစူးစိုက်ဤနည်း, အဘယ်သူမျှအာရုံပြံ့လှငျ့။ သင်သည်သင်၏အသက်တာနှင့်အတူအဘယ်သို့ပြုရမည်ကိုဆုံးဖြတ်။ သငျသညျအနိုင်ရချင်လျှင် - သင်အနိုင်ရသငျသညျအနိုင်ရချင်ကြဘူးလျှင်, - သငျသညျအနိုင်ရကြပါဘူး။
အဘယ်သူမျှမကိစ္စ၌ငါဆရာဝန်တစ်ဦးဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အချို့လူများကပြောပါ: "ဤဥပဒသည် - ဘယ်သူမျှမက, ဖြစ်ပျက်လို့မရပါဘူး" အစားတစ်ခုခုဖြစ်ပျက်စေရန်မည်ကဲ့သို့စဉ်းစား၏။ ထိုသူတို့အဘို့အရာရာကိုအဆိုးမြင်စိတ်တွေဖြစ်ပါတယ်။ "။ ငါကမတတျနိုငျသောသင်အာမခံနှင့်ကဖြစ်ပျက်မည်မဟုတ်" ထိုအခါသင်ကမည်သို့ဖြစ်ပျက်မည်, ဖြစ်ပျက်မည်မဟုတ်ကြောင်းငါ့ကိုအာမခံလျှင်: သူတို့ရဲ့ပထမဦးဆုံးတုံ့ပြန်မှုပါသလဲ အဘယ်ကြောင့် "ငါကမတတျနိုငျသောသင်အာမခံနှင့်ကဖြစ်ပျက်မည်မဟုတ်" အဲဒါကိုအောင်မြင်ရန်ဖို့ဘယ်လို, ဖြစ်ပျက်စေရန်မည်ကဲ့သို့စဉ်းစား start နှင့်ဤအတွေးအခေါ်မေ့လျော့သည်မဟုတ်လော
ရိုးသားမှုကအလွန်အရေးကြီးပါတယ် ကရာစုနှစ်ပေါင်းများစွာနှင့်လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းဘူလ်ဂေးရီးယားအတွက်ဖြစ်သကဲ့သို့။ ကမ္ဘာကြီးကိုရှည်လျားကန်ထရိုက်တစ်လျှောက်လုံးတည်ရှိပေမယ့်ရိုးရိုးသားသားစကားလုံးတလျှောက်လုံး, လက်လှုပ်ခြင်းနှင့်အရာခပ်သိမ်းချောချောမွေ့မွေ့သွားခဲ့ပါဘူး။ သငျသညျမုသာမသုံးလျှင်သင်ရုံထွက်ကြရပါတယ်။ အတော်များများကယခုနားမလည်နိုင်ပါ။
Luben Rabchev အကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ:
တကယ်ကိုလှုံဆော်အားပေးပုံပြင်များ, လူ, ဝိုင် | | rating:5/ 30